IChiefs isisibeke eceleni isamba ezosayina ngaso oweBay
June 28, 2021 Impempe.com
IKaizer Chiefs izoshaya ngodonga lwasemuva oluhlukile ngesizini ezayo. Lokhu kulandela ukuthi sekuvele ukuthi iChiefs seyiyibeke eceleni imali efuna ukuthenga ngayo isitobha seRichards Bay, uThabani Dube.
UDube ubeyinsika yeNatal Rich Boyz emuva futhi wadlala kahle ngesikhathi bebhene neChiefs kwiNedbank Cup ngasekuqaleni konyaka.
“Baqala lapho ke ukumlandelisisa, bembheka ukuthi uyafitha yini kule nhlobo yomdlali wasemuva abamfunayo. Baneliseka abakubona kanti ngizwa kuthiwa sebelinde ukuthi iBay iqede imidlalo yokuhlunga bese bemlanda.
“Yinhle nemali abazoyikhokha futhi angiboni iBay ingawunqaba ngaliphi uR5-million,” kusho umthombo osondelene nabeChiefs. Uma iBay neChiefs bevumelana, uDube uzoficana noNJabulo Ngcobo eNaturena.
UNgcobo, ubekwiSwallows FC ngesizini edlule futhi udlale ibhola elihle elenze wahalelwa amaqembu amaningi. Nokho Impempe seyingaluveza ukuthi iChiefs yiyo ewine umbango walo mdlali ebikuwo neMamelodi Sundowns.
Omunye osondelene nalo mdlali uthe ujabule uyafa, uhluleka nawukuzibamba. Uthe ubhala emilayezweni yakhe (status) kuWhatsApp izinto ezikuvezayo ukuthi sekuseduze asayine kwiChiefs.
“Okunye nje akubhalile wukuthi engabe lizomfanela kanjani ijezi elinemibala emnyama nosagolide. Lilodwa ke iqembu eligqoka leyo mibala kuleli. Siyamjabulela ngoba kudala elisebenzela leli thuba,” kusho lo mthombo.
IChiefs ike yamataniswa nanoKhanyisa Mayo wayo iBay kanti ngokuthola kwethu ayikasho lutho ngaye kubaphathi beqembu. Nokho omunye uthe naye iyamfuna kuwukuthi ayisathandi ukukhuluma ngabadlali ebafunayo ngoba kuba khona nabanye ababacathamelayo ngemuva kokuzwa lokho.
Ukufika kukaNgcobo, odlaliswa ngelikaRoad Block noDube kuzoyiqinisa kakhulu iChiefs emuva la seyisele khona noDaniel Cardoso noMulomowandau Mathoho.
Bobabili laba iminyaka isibahambele kanti sebenokuhlushwa nawukulimala njalo. UNgcobo noDube iminyaka isekahle njengoba bena-27 na-28 ngokulandelana.
FUNDA NALA: IPirates ihlabane ngoweMaritzburg
Uma bengasheshe basijwayele isitayela seChiefs, bengagcina kuyibo abadlala kule ndawo. Umqeqeshi weChiefs osanda kubuya, uStuart Baxter uyaziwa ngekhono lakhe lokwakha udonga lwasemuva okunzima ukudlula kulo.
Akungabazeki ukuthi nakulokhu uzoqala ngalo uma esehlanganisa inqanawe yakhe azongena ngayo empini yezicoco zakuleli ngesizini ezayo. Isandla sikaBaxter ekuvaleni emuva sesivele siyabonakala njengoba ingazange ingenelwe goli kuyo yomibili imdlalo yayo neWydad Athletic emidlalweni eyandulela owamanqamu kwiCAF Champions League.
Previous Previous post: USantos uphatheke kabi sebekhihla isililo abePotugal sebedliwe
Next Next post: Akukho simanga kwiChiefs, kusho uHassan wodumo kwi-Al Ahly